IVidiyo: Uyilo lweWebhu encinci kunye nokuThengisa | Martech Zone
NgoLwesithathu, Oktobha 12, 2011 Lwesine, Okthobha 27, 2011 Douglas Karr
Ividiyo yetekhnoloji yentengiso kule nyanga yazisa inkampani yetekhnoloji eyahluke kancinane. Hayi, asiqali ukupapasha ividiyo nganye ye-arhente eMartech- kodwa besifuna ukubonelela ngengqondo entsha malunga ne-arhente entsha. Ukuphawula, uyilo kunye neearhente zentengiso zihlala zisebenza kunye nezisombululo ezishelfini. Oku akunjalo Encinci.
Ixesha elingaphezulu, iqela le-SmallBox liphuhlise inkqubo yolawulo lomxholo elungiselelwe iimfuno zomthengi ngamnye abazisa kuye. Isoftware i-agile kwaye inoyilo lweemodyuli oluvumela ukongeza kwiimpawu ezintsha kunye nokusebenza ngokuhamba kwexesha. I-SmallBox iqhubekile nokuphuhlisa amanqaku abancede abathengi babo, kubandakanya imodyuli ye-FAQ.
Ngelixa iiarhente ezininzi ziqhubeka nokuzama ukufumana ubungakanani obulingana nayo yonke into, iSmallBox yiarhente eyahlukileyo ekholelwa ukuba umthengi ngamnye uzimele, efuna isisombululo esahlukileyo kunye nesicwangciso sentengiso esahlukileyo. Kwimeko apho uyazibuza, i-SmallBox ayisebenzisi i-CMS yayo ukutshixa inkampani, nokuba yeyiphi. Abaxhasi bakhululekile ukuba bashiye kunye isisombululo sokusetyenziswa kwabo.